Ithuluzi yokwakha yisisekelo lapho uhlu lwamasevisi olunikezwa ithimba lokwakha lwakhiwa. Kuxhomeke kuyo, ukuthi kahle kangakanani futhi umsebenzi uzokwenziwa. Ngakho-ke, kufanele akhethwe ngokucophelela nokukhathalela okukhethekile.
Isimiso esiyinhloko sokuthengwa kwemishini enjalo kungcono ukusetshenziswa nokuthembeka kwayo. Yingakho abanikazi abaningi bakhetha ukusebenzisa insimbi yebhethri "Bosch".
Iqiniso liwukuthi le nkampani izenzele yona njengomenzi wekhwalithi ephezulu kakhulu nemishini ethembekile yokwakha. Ngokwenza njalo, ikhiqiza imigqa ehlukahlukene yemikhiqizo yayo, eyenzelwe izimo ezithile kanye nokusebenza okukhulu. Okuqatshelwe kakhulu ibhethri ibhethri Bosch, elenzelwe ukusebenza ezindaweni ezinkulu zokwakhiwa, liwela esigabeni sochwepheshe.
Ibonakala ngamandla aphakeme futhi inokumelana okuhle nokugqoka, okufezwa ngokwenza zonke izingxenye ezigcizelelayo ezivela ezintweni eziphakeme futhi eziqinile. Futhi, amabhethri abo aklanyelwe ukuphila okude ngaphandle kokuvuselela.
Ithuluzi lebhethri ngezinye izikhathi alinakwenzeka kalula ezimweni ezithile, uma kudingeka ukuba wenze ukufakwa kude kude nomthombo wamandla. Kuyinto elula ukuyisebenzisa ezindaweni ezinzima ukufinyelela lapho kungenakwenzeka ukusebenza namadivayisi axhunyiwe kwinethiwekhi.
Kodwa-ke, kunezimo eziyingozi, okungeke zilalele ukusetshenziswa kwekhaya. Zihlobene neqiniso lokuthi ithuluzi lebhethri ngokuqondile lixhomeke kubhethri, futhi lokhu kubonakala emandleni ayo. Uma kunjalo, ngokushesha ibhethri lizodliwa. Lokhu kubonakala kakhulu ekwakhiweni kwezinto ezinkulu, lapho kudingekile ukwenza umsebenzi ngaphandle kokuphazanyiswa kanye nemigomo emikhulu.
Yingakho abanikazi abaningi bakhetha ukuba namabhethri amaningana. Ukusebenza nomunye, okwesibili kufakwa ekubuyiselweni kabusha. Lokhu kukuvumela ukuba ungaphazanyiswa emsebenzini futhi ube njalo umakhalekhukhwini.
Njengamanje, amamodeli amasha aqala ukuvela ezimakethe zokwakha, okungafakwa ngokuthi "ithuluzi lebhethri". Banebhethri elincane elenzelwe ukusebenza esikhathini esifushane. Idivayisi ngokwayo yenziwe inguqulo encishisiwe kakhulu, iqondiswe kuphela ukuze kube lula. Ithuluzi elinjalo lebhethri laklanyelwe ukusebenza ezindaweni ezingenafinyeleleka, lapho ungakwazi ukusebenzisa amadivaysi ajwayelekile, nokusetshenziswa kwamathuluzi ngesandla kungathatha isikhathi esiningi.
Ngakho-ke, embonini yokwakha, ukubaluleka kwemishini yokuzimela nokuhambayo ayikwazi ukunqunywa. Kungaba ngcono kakhulu izinga lomsebenzi kanye nomkhiqizo wezabasebenzi. Kumakhamphani amancane okwakhiwa noma amaqembu, ukutholakala kwethelu elinjalo kuyadingeka, ngoba akusizi nje kuphela emsebenzini, kodwa futhi ngezinga elithile kuyinkhomba yekhono.
Yini umqoqo? Izinhlobo nezinhloso zayo
I-Tablet Wexler.Tab 7t: ukubuyekezwa, izincazelo, izincazelo kanye nokubuyekezwa of abanikazi
Brick aluka: isinyathelo ngesinyathelo imiyalelo kanye nezeluleko mayelana nokwenziwa